ဒီလူက ကိုယ့်အတွက်သေချာမလိုဖြစ်ပြီးမှ ဝေးကွာသွားရတဲ့ တကယ့်အကြောင်းရင်းက…💌 – Trend.com.mm
ဒီလူက ကိုယ့်အတွက်သေချာမလိုဖြစ်ပြီးမှ ဝေးကွာသွားရတဲ့ တကယ့်အကြောင်းရင်းက…💌
Posted on July 24, 2018 April 11, 2019 by Noel
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တို့တွေတွေးမိကြတယ်။ဒီလူနဲ့နောက်ဆုံး ဝေးကွာရမယ်ဆိုရင် ဘာလို့ဆုံတွေ့ခွင့်ပေးတာလဲပေါ့။ဒီလောက်လူတွေအများကြီးထဲကမှ ကိုယ်တို့တွေ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို သံယောဇဉ်တွေပိုခဲ့ကြတယ်၊စေတနာတွေပိုခဲ့ကြတယ်။ဒီလူနဲ့ ပိုပြီးနီးစပ်လာတော့မယ်ဆိုပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကိုယ်တို့ ဝေးကွာသွားခဲ့ကြတယ်။သူစိမ်းတွေလို ပြန်ဖြစ်သွားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ အချိန်တွေကုန်ဆုံးလာလိုက် နောက်ထပ်သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို အချစ်တွေပိုလိုက်နဲ့ပေါ့။
အရင်လူနဲ့ဝေးကွာခဲ့လို့ နောက်လူကို လက်လွှတ်မခံတော့ဘူးလို့ တွေးထားခဲ့ကြပေမဲ့ ထပ်ပြီးဝေးကွာခဲ့ပြန်တယ်။ဘာလို့များလဲ?ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်တို့တွေ အချစ်ကိုကြောက်လာတယ်။အယုံအကြည်မရှိကြတော့ဘူး။ထပ်ချစ်လည်း ထပ်ပြီးဝေးကွာရဦးမှာပဲဆိုတဲ့အသိကြီးနဲ့ ထပ်ချစ်ဖို့လည်းမကြိုးစားကြတော့ဘူး။
ကိုယ်တို့တွေ အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်တို့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့သူက တစ်ယောက်နှစ်ယောက်မကနိုင်ဘူးပေါ့။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Rania Naim ဆိုသူအမျိုးသမီးက “ဘုရားသခင်က ကိုယ့်အတွက်သေချာမယ့်လူတစ်ယောက်လို ကိုယ့်အနားကိုတွန်းပို့လိုက်၊ပြန်ဆွဲခေါ်သွားလိုက်နဲ့လုပ်နေရတဲ့တကယ့်အကြောင်းရင်းရှိတယ်”ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုရေးသားထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက တစ်ချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကို Trend ပရိသတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
သူမရဲ့ရေးသားချက်အရတော့…”ဘုရားသခင်က ကိုယ့်အတွက်သေချာတော့မယ့်လူတစ်ယောက်လို အနားကိုတွန်းပို့လိုက်၊ပြန်ဆွဲခေါ်သွားလိုက်လုပ်နေတာက ကိုယ်တို့ကို မတူညီတဲ့သင်ခန်းစာတွေ၊အကြောင်းအရာတွေသင်ပြပေးဖို့ပါပဲတဲ့။ပြီးတော့ ကိုယ်တို့ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ပုံချစ်နည်း၊နားလည်ပုံနားလည်နည်းတွေမတူညီကြတဲ့အတွက် ကိုယ်တုိ့အနားမှာချစ်တဲ့သူတွေများလာလေ ဘယ်သူကကိုယ်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးလဲ၊ဘယ်သူက ကိုယ်တို့အပေါ်နားလည်အပေးနိုင်ဆုံးလဲဆိုတာ ရှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ဒီလို ကိုယ့်အနားမှာအဆုံးထိသေချာရှိမနေကြတဲ့သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ခဏတာ တာဝန်ကိုကျေပွန်ကြတာပါပဲ။ကိုယ်တို့ဘ၀တစ်သက်တာလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့သူကိုတော့ ဘုရားသခင်က သေချာရွေးချယ်စေချင်ခဲ့တဲ့ပုံပါ။
သံယောဇဉ်တွေပိုခဲ့ကြတဲ့သူစိမ်းတစ်ရံတွေထဲမှာ ကိုယ်တို့မဝေးကွာချင်ခဲ့တဲ့သူ၊မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်တို့ဘ၀ထဲဆွဲခေါ်ထားချင်ခဲ့တဲ့သူဆိုတာ ရှိခဲ့ကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ ဝေးကွာခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆို ကိုယ်တို့အသည်းကွဲကြတယ်ဟုတ်! ဘုရားသခင်က ဒီလူတွေဆီကနေ ကိုယ်တို့ကို ဘယ်လိုစွန့်လွှတ်တတ်အောင်၊ဘယ်လိုပြန်ပြီး ဒဏ်ရာကိုကုစားတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တာပါပဲ။သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဘုရားသခင်က ကိုယ်တို့ဘ၀အတွက် တကယ်သင့်တော်လိုက်ဖက်တဲ့သူကို ထပ်ပြီးတွန်းပို့ပေးဦးမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါက ဘယ်တော့လဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တို့တွေမသိနိုင်ဘူးပေါ့။
ကိုယ်တို့အတွက် တစ်ဘ၀လုံးစာလက်တွဲရမယ့်တစ်စုံတစ်ယောက် ကိုယ်တို့အနားကိုရောက်လာတဲ့အခါ အတိတ်ကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။အဲဒီတော့မှ ကိုယ်တို့လက်ကိုထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ ကိုယ်တို့ရဲ့အသည်းနှလုံးကို ထိခဲ့တဲ့သူ ဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိလဲဆိုတာ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့”။ဒါလေးက သူမရေးသားထားခဲ့တဲ့စာလေးပါ။
သူမရေးသားထားခဲ့သလိုပဲ အခု သင့်ရဲ့အချစ်ရေးက ကံဆိုးနေတာဖြစ်စေ၊ကံကောင်းနေတာဖြစ်စေ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲမှုတွေက ပိုကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါလို့ စိတ်ထဲကနေ အမြဲတွေးပြီးလက်ရှိအချိန်အတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ ❤
တဈခါတဈလေ ကိုယျတို့တှတှေေးမိကွတယျ။ဒီလူနဲ့နောကျဆုံး ဝေးကှာရမယျဆိုရငျ ဘာလို့ဆုံတှခှေ့ငျ့ပေးတာလဲပေါ့။ဒီလောကျလူတှအေမြားကွီးထဲကမှ ကိုယျတို့တှေ သူစိမျးတဈယောကျကို သံယောဇဉျတှပေိုခဲ့ကွတယျ၊စတေနာတှပေိုခဲ့ကွတယျ။ဒီလူနဲ့ ပိုပွီးနီးစပျလာတော့မယျဆိုပွီးပြျောရှငျနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ ကိုယျတို့ ဝေးကှာသှားခဲ့ကွတယျ။သူစိမျးတှလေို ပွနျဖွဈသှားကွတယျ။ဒီလိုနဲ့ပဲ အခြိနျတှကေုနျဆုံးလာလိုကျ နောကျထပျသူစိမျးတဈယောကျကို အခဈြတှပေိုလိုကျနဲ့ပေါ့။
အရငျလူနဲ့ဝေးကှာခဲ့လို့ နောကျလူကို လကျလှတျမခံတော့ဘူးလို့ တှေးထားခဲ့ကွပမေဲ့ ထပျပွီးဝေးကှာခဲ့ပွနျတယျ။ဘာလို့မြားလဲ?ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယျတို့တှေ အခဈြကိုကွောကျလာတယျ။အယုံအကွညျမရှိကွတော့ဘူး။ထပျခဈြလညျး ထပျပွီးဝေးကှာရဦးမှာပဲဆိုတဲ့အသိကွီးနဲ့ ထပျခဈြဖို့လညျးမကွိုးစားကွတော့ဘူး။
ကိုယျတို့တှေ အတိတျကိုပွနျကွညျ့လိုကျရငျ ကိုယျတို့ခဈြခဲ့ကွတဲ့သူက တဈယောကျနှဈယောကျမကနိုငျဘူးပေါ့။ဒီအကွောငျးအရာနဲ့ပတျသကျပွီး Rania Naim ဆိုသူအမြိုးသမီးက “ဘုရားသခငျက ကိုယျ့အတှကျသခြောမယျ့လူတဈယောကျလို ကိုယျ့အနားကိုတှနျးပို့လိုကျ၊ပွနျဆှဲချေါသှားလိုကျနဲ့လုပျနရေတဲ့တကယျ့အကွောငျးရငျးရှိတယျ”ဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျနဲ့ဆောငျးပါးလေးတဈခုရေးသားထားတာကိုတှလေို့ကျရပါတယျ။အဲ့ဒီထဲက တဈခြို့အကွောငျးအရာလေးတှကေို Trend ပရိသတျကွီးကိုပွနျပွီးမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
သူမရဲ့ရေးသားခကျြအရတော့…”ဘုရားသခငျက ကိုယျ့အတှကျသခြောတော့မယျ့လူတဈယောကျကို အနားကိုတှနျးပို့လိုကျ၊ပွနျဆှဲချေါသှားလိုကျလုပျနတောက ကိုယျတို့ကို မတူညီတဲ့သငျခနျးစာတှေ၊အကွောငျးအရာတှသေငျပွပေးဖို့ပါပဲတဲ့။ပွီးတော့ ကိုယျတို့ကို လှတျလပျခှငျ့ပေးလိုကျတယျပေါ့။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြပုံခဈြနညျး၊နားလညျပုံနားလညျနညျးတှမေတူညီကွတဲ့အတှကျ ကိုယျတို့အနားမှာခဈြတဲ့သူတှမြေားလာလေ ဘယျသူကကိုယျတို့အတှကျ အကောငျးဆုံးလဲ၊ဘယျသူက ကိုယျတို့အပျေါနားလညျအပေးနိုငျဆုံးလဲဆိုတာ ရှာတှလေ့ာပါလိမျ့မယျ။ဒီလို ကိုယျ့အနားမှာအဆုံးထိသခြောရှိမနကွေတဲ့သူတှကေလညျး သူတို့ရဲ့ ခဏတာ တာဝနျကိုကပြှေနျကွတာပါပဲ။ကိုယျတို့ဘဝတဈသကျတာလုံးအတှကျ လိုအပျတဲ့သူကိုတော့ ဘုရားသခငျက သခြောရှေးခယျြစခေငျြခဲ့တဲ့ပုံပါ။
သံယောဇဉျတှပေိုခဲ့ကွတဲ့သူစိမျးတဈရံတှထေဲမှာ ကိုယျတို့မဝေးကှာခငျြခဲ့တဲ့သူ၊မဖွဈနိုငျပမေဲ့ ကိုယျတို့ဘဝထဲဆှဲချေါထားခငျြခဲ့တဲ့သူဆိုတာ ရှိခဲ့ကွမှာပါ။ဒါပမေဲ့ ဝေးကှာခဲ့ကွတယျ။ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာဆို ကိုယျတို့အသညျးကှဲကွတယျဟုတျ! ဘုရားသခငျက ဒီလူတှဆေီကနေ ကိုယျတို့ကို ဘယျလိုစှနျ့လှတျတတျအောငျ၊ဘယျလိုပွနျပွီး ဒဏျရာကိုကုစားတတျအောငျသငျပေးခဲ့တာပါပဲ။သခြောတာတဈခုကတော့ ဘုရားသခငျက ကိုယျတို့ဘဝအတှကျ တကယျသငျ့တျောလိုကျဖကျတဲ့သူကို ထပျပွီးတှနျးပို့ပေးဦးမှာပါပဲ။ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒါက ဘယျတော့လဲဆိုတာတော့ ကိုယျတို့တှမေသိနိုငျဘူးပေါ့။
ကိုယျတို့အတှကျ တဈဘဝလုံးစာလကျတှဲရမယျ့တဈစုံတဈယောကျ ကိုယျတို့အနားကိုရောကျလာတဲ့အခါ အတိတျကိုလညျးအတူတူပွနျကွညျ့နိုငျပွီးအဲဒီတော့မှ ကိုယျတို့လကျကိုထိတှခေဲ့တဲ့သူတှနေဲ့ ကိုယျတို့ရဲ့အသညျးနှလုံးကို ထိခဲ့တဲ့သူ ဘယျလိုကှာခွားမှုတှရှေိလဲဆိုတာ နားလညျလာပါလိမျ့မယျတဲ့”။ဒါလေးက သူမရေးသားထားခဲ့တဲ့စာလေးပါ။
သူမရေးသားထားခဲ့သလိုပဲ အခု သငျ့ရဲ့အခဈြရေးက ကံဆိုးနတောဖွဈစေ၊ကံကောငျးနတောဖွဈစေ ဘယျလိုဖွဈဖွဈ ပွောငျးလဲမှုတှကေ ပိုကောငျးဖို့ဖွဈလာတာပါလို့ စိတျထဲကနေ အမွဲတှေးပွီးလကျရှိအခြိနျအတှကျ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုလုပျဖို့ ဘယျတော့မှမမပေ့ါနဲ့
သူတို့စုံတွဲအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေခံနေရပေမဲ့ အပြုံးမပျက်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ Nick Jonas